Amathikithi weshibhile we-OBB ashibhile namanani entengo wokuhamba | Londoloza Isitimela
Amathikithi weshibhile we-OBB ashibhile namanani entengo wokuhamba
Ikhaya > Amathikithi weshibhile we-OBB ashibhile namanani entengo wokuhamba
Lapha ungathola lonke ulwazi mayelana Amathikithi wesitimela ashibhile we-OBB futhi Izintengo zokuhamba ze-OBB kanye nezinzuzo.
Izihloko: 1. Izithombe ezinhle kakhulu ze-OBB
2. Mayelana ne-OBB 3. Imininingwane ephezulu yokuthola ithikithi leshibhile le-OBB lesitimela
4. Amanani amathikithi we-OBB abiza malini 5. Izindlela Zokuhamba: Kungani kungcono ukuthatha izitimela ze-OBB, futhi ungahambi ngendiza
6. Uyini umehluko phakathi kweZinga, Comfort, kanye neSparschiene ku-OBB 7. Ingabe kukhona okubhaliselwe kwe-OBB
8. Isikhathi esingakanani ngaphambi kokusuka kwe-OBB ukufika 9. Yini amashejuli wesitimela e-OBB
10. Yiziphi iziteshi ezisetshenziswa yi-OBB 11. I-OBB FAQ
Izithombe ezinhle kakhulu ze-OBB
Ngezinga eliphakeme lokufika kwesikhathi le 96%, obb (kwesinye isikhathi kuthiwa yi-OEBB) ungomunye wabasebenza ngokuthembekile kojantshi baseYurophu.
Minyaka yonke, I-OBB iyathatha 447 izigidi zabantu futhi 105 amathani ayisigidi wempahla enqamula lapho iya e-Austria naseYurophu.
I-OBB inemvelo enhle, futhi 100% wabo bonke ugesi wabo utholakala kumandla avuselelekayo.
I-OBB ngumhlinzeki wesevisi omkhulu wokuhamba wase-Austria.
obb, I-Austrian Federal Railways, elinye igama le-Austrian Federal Railways. Kusukela yasungulwa ku 1923, I-OBB inikeze ngemisebenzi yokuhamba kubantu base-Australia iminyaka manje. Ucwaningo lwakamuva lukhombisile lokho eYurophu, I-OBB ihamba phambili ngokugcina isikhathi, ukuthembeka, imvamisa.
Izipesheli ze-OBB imisebenzi yesitimela ngaphakathi e-Austria nakulo lonke elaseYurophu. Ngethikithi elifanele, ungavakashela konke okuhle kakhulu izindawo zamaholide eYurophu. Ngezigaba ezahlukahlukene zamathikithi nokubhaliswa kwamakhadi, I-OBB inika izidingo zawo wonke umuntu.
Izitimela ze-OBB zivame ukuhambela iVienna – I-Graz, Salzburg – E-Vienna, Linz – ISt. Polten, I-Graz - iSalzburg. Ungangena futhi emazweni angomakhelwane ngaphakathi kweYurophu usebenzisa izitimela ze-OBB.
Ngaphesheya kwenhlangano, 41,904 abasebenzi abasebenza kojantshi bezitimela namanethiwekhi amabhasi (kanye ngaphezulu 2,000 abaqeqeshiwe) qinisekisa ukuthi abanye 1.3 abagibeli besigidi bafinyelela lapho bephephile nsuku zonke.
Iya ku Gcina Ikhasi eliyisiqalo noma usebenzise lewijethi ukusesha uqeqesha amathikithi e-OBB
Imininingwane ephezulu yokuthola ithikithi leshibhile le-OBB lesitimela
inombolo 1: Bhuka amathikithi akho e-OBB kusengaphambili ngangokunokwenzeka
Intengo ye Amathikithi wesitimela e-OBB likhuphuka njengoba usuku lokuhamba lusondela. Ungonga imali ngokubhuka amathikithi akho wesitimela e-OBB ngangokunokwenzeka kusukela ngosuku lokuhamba. Amathikithi wesitimela e-OBB ayatholakala ekuqaleni 3 ukuze 6 izinyanga ngaphambi kokusuka kwesitimela. Ukubhuka kusenesikhathi kuqinisekisa ukuthi uthola amathikithi ashibhile kakhulu wesitimela se-OBB. Zilinganiselwe ngenani, ngokushesha nje ubhukha, okushibhile kuwe. Ukuze wonge imali ngamathikithi wesitimela e-OBB, thenga amathikithi akho kusenesikhathi.
inombolo 2: Ukuhamba nge-OBB ngezikhathi zokuphuma kwezikhathi eziphakeme
Amathikithi wesitimela e-OBB eshibhile ngesikhathi se-off-peak times, ekuqaleni kwesonto, futhi emini. Ungaqiniseka ukuthola athenge amathikithi esitimela ngemali eshibhile phakathi nesonto. Ngolwesibili, NgoLwesithathu, nangoLwesine, Amathikithi wesitimela e-OBB yiwona awomnotho kakhulu. Ngenxa yevolumu yabahambi bebhizinisi abaqala ukusebenza ekuseni nakusihlwa, amathikithi esitimela abiza ngaphezulu. Kushibhile kakhulu ukuhamba nganoma yisiphi isikhathi phakathi kokusa nokusa kusihlwa. Impelaviki kungenye yezikhathi eziphakeme zezitimela, ikakhulukazi ngoLwesihlanu nangoMgqibelo. Izintengo zamathikithi esitimela e-OBB nazo ziyenyuka ku amaholide omphakathi namaholide esikole.
inombolo 3: Oda amathikithi akho e-OBB uma uqiniseka ngohlelo lwakho lokuhamba
Izitimela ze-OBB zifunwa kakhulu, nangomncintiswano omncane, okwamanje bahlala ukhetho oluphezulu lwezitimela e-Austria. Bangakwazi ukubeka imikhawulo yamathikithi esitimela efana naleyo abanayo evimbela ukushintshwa kwamathikithi noma ukubuyiselwa kwemali ngaphandle kokuthi kuwuhlobo lwebhizinisi lethikithi. Yize kusenamawebhusayithi lapho ungathengisela abantu amathikithi akho amasekeni, I-OBB ayivumeli ukuthengiswa kwamathikithi asebusweni. Lokhu kukusiza kanjani ukonga imali? Oda ithikithi lakho kuphela uma uqiniseka ukuthi uhlelo lwakho luzokusindisa ekubhukeni ithikithi elilodwa kabili ngoba kukhona okuqhamile futhi awukwazi ukusebenzisa ithikithi lokuqala.
inombolo 4: Thenga amathikithi akho e-OBB ku-Gcina A Isitimela
Gcina isitimela kukhulu kunakho konke, okuncono, namadili ashibhile kakhulu amathikithi wesitimela eYurophu. Ukuxhumana kwethu nabasebenzi abaningi bezitimela, imithombo yamathikithi esitimela, kanye nolwazi lwethu lobuchwepheshe be-algorithms kusinika ukufinyelela kumathengi ashibhile wesitimela. Asinikezi kuphela amathikithi ashibhile wesitimela we-OBB kuphela; sinikezela ngokufanayo kwezinye izindlela ze-OBB.
Amanani amathikithi we-OBB abiza malini?
Amathikithi e-OBB aqala kusuka ku- € 1,5 aze afike ku-€ 51 kohambo olulodwa lwesitimela. I inani lethikithi lesitimela le-OBB kuya ngokuthi hlobo luni lwethikithi olithengayo nokuthi ukhetha ukuhamba nini:
Okujwayelekile € 1,50 – € 51 € 2,40 – € 100
Isigaba sokuqala € 1,50 – € 51 € 2,40 – € 100
Izindlela Zokuhamba: Kungani kungcono ukuthatha izitimela ze-OBB, futhi ungahambi ngendiza
1) Ufika eCity Center. Lokhu kungenye yezinzuzo zezitimela ze-OBB uma ziqhathaniswa nezindiza. Izitimela ze-OBB nakho konke okunye ukuhamba kwesitimela kusuka noma yikuphi edolobheni kuya enkabeni yedolobha elilandelayo. Kuyakongela isikhathi kanye nezindleko ze-cab kusuka esikhumulweni sezindiza ukuya enkabeni yedolobha. Ngezitimela, Kulula ukufika kunoma yiliphi idolobha oqonde kulo. Akukhathalekile ukuthi usukaphi, I-Munich, Salzburg, Linz, noma uCologne, Ukuma kwamaphakathi nedolobha kuyinzuzo enkulu yezitimela ze-OBB!
2) Ukuhamba ngezindiza kudinga ukuthi ube esikhumulweni sezindiza okungenani amahora ambalwa ngaphambi kwesikhathi sakho sendiza. Kuzofanela ukuthi uhlole amasheke wokuphepha ngaphambi kokuvunyelwa ukugibela indiza. Izitimela ze-OBB, kufanele ube esiteshini esingaphansi kwehora ngaphambi kwalokho. Lapho futhi ubheka isikhathi okuthatha ngaso ukusuka esikhumulweni sezindiza uye enkabeni yedolobha, uzokwazi ukuthi izitimela ze-OBB zingcono ngokwesikhathi sokuhamba esiphelele.
3) Ebusweni, intengo yamathikithi wesitimela e-OBB abonakala ebiza kakhulu kunamathikithi endiza esabelomali. Nokho, lapho uqhathanisa wonke amacala abandakanyekile, Amathikithi wesitimela e-OBB anentengo engcono yamanani. Ngezinye izindleko ezinjengezindleko zemithwalo okungafanele uzikhokhele ezitimeleni, ehamba nge-OBB uhamba phambili.
4) Izitimela zinobungane bemvelo. Ngokuqhathanisa phakathi kwezitimela nezindiza, izitimela bezizophuma zibheke phezulu. Izindiza ziyangcolisa kakhulu umkhathi ngamazinga aphezulu ekhabhoni awanikezayo. Izitimela ngokuqhathanisa ziyakhipha I-Carbon 20X engaphansi kunezindiza.
Uyini umehluko phakathi kweZinga, Comfort, kanye neSparschiene ku-OBB?
I-OBB inezigaba ezahlukahlukene zamathikithi amabhajethi nezinhlobo zabahambi: kungaba ibhizinisi noma ezokungcebeleka. Ungaqiniseka ukuthi elinye lalamathikithi lizokufanela.
Amathikithi Ajwayelekile we-OBB:
Ithikithi elijwayelekile ithikithi lesitimela elivumelana nezimo ngokwengeziwe elethwa yi-OBB. Uma kufanele uhambe ngesaziso esifushane, kufanele uthole leli thikithi. Awukhawulelwe esitimeleni esithile, futhi uvunyelwe ukukhetha ukuxhumana kwakho. Ithikithi elijwayelekile le-OBB livumelekile 2 izinsuku ngaphandle komzila nesiteshi sokuthenga. Amathikithi ajwayelekile angabuyiselwa mahhala ngosuku olungaphambi kosuku lwawo lokuqala lokusebenza. Lapho uthenga leli thikithi online, kunemiyalo ekhethekile yokubuyiselwa kwemali nokuba semthethweni.
obb Amathikithi enduduzo:
Amathikithi e-OBB Komfort amathikithi ajwayelekile e-OBB, futhi zinikelwa ukuxhumana ngesitimela sasebusuku. Ithikithi le-OBB Komfort lihlanganisa izindleko zohambo, ukubhuka kusigaba sokuhamba esikhethiwe, ibhulakufesi ekhishini lokulala.
Ngokungafani nethikithi elijwayelekile, ithikithi leKomfort aliguquki nhlobo. Ibhukelwe indlela ethile nesitimela esithile. Uzodinga ukuthola ithikithi elisha nganoma yikuphi ukuxhumeka ngaphambi nangemva kwendlela ehlanganiswa yithikithi.
Ngokubuyiselwa kwemali, Amathikithi we-OBB Komfort abuyiselwa mahhala kuze kube 15 izinsuku ukuya ngosuku lokuqala lweqiniso. Ngemuva kwe 15 uphawu losuku, Amathikithi e-Komfort abuyiselwa ku- 50% ngentengo yoqobo.
Amathikithi e-OBB Sparschiene:
Ngaphandle kwe- ithikithi elijwayelekile nethikithi leKomfort, I-OBB inikezela olunye uhla lwamathikithi aziwa njengethikithi le-Sparschiene. Leli banga alishibhile futhi kubahambi abasebenza ibhajethi ephansi. Kunezinhlobo ezimbili zamathikithi eSparschiene.
Ingabe kukhona okubhaliselwe kwe-OBB?
Ezakhamuzini zasendaweni, kunezinhlobo ezimbili zokubhalisele, i-Vorteilscard ne-Osterreichcard. Okwamazwe omhlaba siphakamisa ukuthi kuthengwe isikhathi eside ngaphambi kwalokho uzokwethulwa ngenketho eshibhile.
I-Vorteilscard Classic ingathengwa ku: (izakhamizi zendawo zithola a 45% Isaphulelo ngethikithi elilodwa labagibeli abathenga ithikithi labo kusuka)
– Okokubala kwamathikithi e-OBB.
– Enkonzweni yamakhasimende e-OBB 05-1717
– Kusuka kubasebenzi ezitimeleni namabhasi e-OBB.
Nge-Osterreichcard Classic, uzothola isaphulelo esengeziwe sokubhuka 5% ithikithi elilodwa elijwayelekile labagibeli lapho uthenga ithikithi kusuka:
– Umshini wokuthengisa amathikithi we-OBB esiteshini sesitimela.
Abagibeli asebekhulile 15 nokungaphezulu kungathenga i-Vorteilscard Family. Leli khadi lisebenza ngokuhambisana nekhadi lokuhlonza isithombe, okufanele ifake iminyaka yobamba. Ngale ithikithi, ungahamba kuzo zonke izitimela ze-OBB.
Bonke abaphathi be-Vorteilscard Family bathokozela ama-perks we-Vorteilscard classic. Ngaphezu ozungezayo zakudala, abanikazi ababili bekhadi lomndeni iVorteilscard nabo bathola isaphulelo uma behamba ndawonye nosana noma ingane. 4 izingane ngamunye ophethe i-Vorteilscard Family uzothola isaphulelo sika 100% kuthikithi elilodwa elijwayelekile.
Ikhadi Lentsha lase-Austria
Kuze kube lusuku olungaphambi kokuzalwa kwabo kwama-26, abagibeli bangathenga i-Osterreichcard Jugend. Ungafakazela iminyaka yakho nge-ID yesithombe ngobufakazi beminyaka.
Bonke abazali bezingane nezinsana abathola isibonelelo semindeni e-Austria noma kwenye indawo bangathenga Umndeni wakwa-Osterreichcard. Izinzuzo ziyefana nalezo ze-Osterreichcard classic.
Abagibeli bangathenga i-Osterreichcard Classic. Nge-Osterreichcard Classic, bazothola isaphulelo sika 100% ngezindleko zokubhuka izihlalo zebanga le-1 nele-2. Nge-Osterreichcard Classic ikilasi lesi-2, uthola a 50% Isaphulelo ekushintsheni kweklasi kusuka ekilasini lesi-2 kuye kwelesi-1 ithikithi elijwayelekile.
Abagibeli abadala base-Austrian abagugile 63 futhi ngaphezulu ungathenga i-Osterreichcard Senior. Izinzuzo ziyefana nalezo ze-Osterreichcard classic.
I-Austria Card Special
Abantu abakhubazekile abanokufakwa okulandelayo esitifiketini sabo sokukhubazeka noma sokukhubazeka okunzima okuhlobene nempi bangathenga i-Osterreichcard Spezial. Izinzuzo ziyefana nalezo ze-Osterreichcard classic.
ILinz to amathikithi eSaint Polten
IVienna kuya amathikithi eSalzburg
I-Saint Polten eya kumathikithi eWiener Neustadt
Amathikithi eSalzburg kuya eGrey
Isikhathi esingakanani ngaphambi kokusuka kwe-OBB ukufika?
Kunzima ukusho ngokunembile kwesibili, kepha Gcina isitimela weluleka ukuthi ufike cishe ihora ngaphambi kwesikhathi sakho sokusuka. Uma uqeda ukulawula iphasiphothi kusenesikhathi ngokwanele, ungathenga izinto ozidingayo ukuze wenze uhambo lwakho lwesitimela lube ntofontofo ngangokunokwenzeka.
Yini amashejuli wesitimela e-OBB?
Yiziphi iziteshi ezisetshenziswa yi-OBB?
Isiteshi saseVienna se-OBB yiVienna Hauptbahnhof (Isiteshi esikhulu saseVienna), etholakala eduze kweSudtiroler Platz enkabeni yeVienna.
KuLinz, Kulezi zinsuku izitimela ze-OBB suka futhi ufike kusuka eLinz Central Station (Isiteshi esimaphakathi neJamani silingana neHauptbahnhof), bude buduze nomfula iDanube.
Isiteshi sesitimela esikhulu (Isiteshi seSalzburg Central) itholakala maphakathi nedolobha lesibili ngobukhulu e-Austria – Salzburg.
Ingabe Amabhayithi Avumelekile Ebhodini Izitimela ze-OBB?
Amabhayisikili avunyelwe ezitimeleni ze-OBB inqobo nje uma uthenga ithikithi lawo esiteshini. Babiza u- € 2 ngebhayisikili ngalinye.
Ngabe Izingane Zohamba Kakhululeka ezitimeleni ze-OBB?
Yebo, kepha kuze kufike eminyakeni ethile. Izingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha ubudala zihamba mahhala.
Ngabe Izilwane ezifuywayo zivunyelwe ezitimeleni ze-OBB?
Yebo, bade lapho belandela imihlahlandlela yezilwane ezifuywayo. Izilwane ezifuywayo ezincane kufanele zithwalwe ekhreyini noma ecaleni elifanayo.
Ngabe yini inqubo yokugibela ye-OBB?
Okuceliwe kakhulu I-OBB – Ngabe kufanele ngiyi-oda isihlalo kusengaphambili ku-OBB?
Wena kungaba bokulungile a ngiyazingesikhathi ngaphambili kwezasekhaya obb izitimela ze 3 euro. Wena kuthanda uthole okwakho isihlalo ngemuva kokubhuka.
Ingabe ikhona i-inthanethi ye-Wifi ngaphakathi kwe-OBB?
Yebo. Ungajabulela I-intanethi ye-WiFi yamahhala kuzo zonke izitimela ze-OBB nawo wonke amakilasi okuhamba lapho uthenga amathikithi we-OBB (Ngokuncono ku-SaveATrain.com).
Uma ufundile kuze kube manje, wazi konke okudingeka ukwazi mayelana nezitimela zakho ze-OBB futhi ulungele ukuthenga ithikithi lesitimela sakho se-OBB Londoloza Isitimela
Ngabe ufuna ukushumeka leli khasi esizeni lakho? Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-obb%2F%0A%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi), Noma ungaxhumeka ngqo kuleli khasi.